Waa maxay macnaha Tayada Dugsiga? | Boston School Finder
Mid ka mid ah su'aalaha ugu badan oo ay qoysasku na waydiiyaan ayaa ah: Sideen ku doortaa dugsiga ugu fiican?
Jawaabtu way adag tahay, sababtoo ah qoys kasta waxa uu ku sugan yahay xaalad khaas ah. Ka Boston Schoo Finder ahaa, annagu ma bixinno qiimeynta dugsiga. Taas bedelkeeda, waxaan aad u aaminsannahay in qoys kasta dib-u-eego macluumaadka sida guud loo heli karo ee ku saabsan iskuulka kasta oo ay xiiseynayaan iyo waxayna booqdaan iskuulka si ay fahmaan waafaqsanaanta qiimahaaga.
Haddii aad raadinaysid warbixin dheeraad ah oo ku saabsan sida ilmahaaga loogu dooro iskuulka ugu wanaagsan, fadlan ka dhugo Sida loo doorto Great-Fit School Resource Guide.
Boston School Finder waxay kula talinaysaa in qoys kasta uu akhriyo Xogta Isla Xisaabtanka. Waxaa jiro laba ilood oo aad dulmar ku samayn karto:
Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Hoose iyo mida Sare ee gobalka Massachusetts)
Shaxda Tayada Dugsiga ee Boston Public School (SQF)
In kasta oo xogta isla xisaabtanku ay tahay cabiraad aan waxtar ahayn kaligeed, hadana waxay qoysaska siisaa qaybo muhiim ah oo macluumaad ah oo ay tixgeliyaan inta lagu jiro raadinta dugsigaaga.
Waa maxay macnaha "Heerka Gobolka" ee ku qoran Bogga Dugsi ee websaydhkaaga?
Boggaga dugsiyadeena dadwayanaha (Boston Public Schools iyo dhammaan dugsiyada Commonwealth Charte) waxaa ku jiri kara macluumaad la xariira booska ay uga jiraan “State Level (Heerka Gobalka).” Heerka Gobolka ee dugsiga ayaa ah hal tilmaame oo muujinaaya tayada dugsiga ay u aqoonsatay inuu ka mid noqdo dugsiyada dadweynaha Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE, Waaxda Waxbarashada Dugsiga Hoose iyo Sare ee Gobalka Massachusetts). Heerkaan gobolku wuxuu tixgalinayaa:
Dhibcaha uu ardaygu ka keeno NextGen MCAS, imtixaanka caadiga ah ee gobolka Massachusetts oo lagu cabiro aqoonta waxbarashada ee maaddo kasta.
Horumarka iyo koboca dhibcaha imtixaanka caadiga ah
Heerka dhammaystirka dugsiga sare (Kuwa dugsiyada sare)
In ardayda Ingiriisiga baranaya ay horumar ka sameynayaan iskuulka
In ardaydu ay iskuulada si joogto ah u imaanayaan
In ardaydu ay qaadanayaan fasalo heer sare ah
Sanad kasta gobalku wuxuu hiigsiyo u dajiyaa dugsi kasta iyo degmo kasta ayadoo la raacaayo shuruudaha kore. Haddii dugsiyadu si guud samaynayaan horumaradaas, ama samaynayaan dadaalkii laga rabay inay ka gaaraan imtaxaanka maadooyinka MCAS (kudhawaad 85% ee dugsiyada ku yaala gobalka), dugsiyada waxaa loo aqoonsadaa mid kamid ah qaybaha soo socda:
Dugsiyada Aqoonsiga (Magacaabista ugu wanaagsan ee ay qoondeysay DESE)
Dugsiyada buuxiyay Yoolka
Dugsiyada Qayb ahaan Buuxiyay Yoolalkii laga rabay
Haddii ardayda kujira dugsiyadaas AYSAN buuxin hiigsiyadaas (kudhawaad 15% dugsiyada ku yaala gobalka), dugsiyada waxaa lagu daraa mid kamid ah qaybaha soo socda:
Taageerada Diirada/Yoolka lasaaraayo
Taageero Balaadhan/Dhamaystiran (Magacaabista ugu hooseysa ee ay qoondeysay DESE)
Haddii aad ku aragto “Macluumaad aan dhameystirneyn” oo ku qoran Heerkooda Gobolka, waxay u noqon kartaa sabab la xariirta:
In dugsigu aad ayuu u yar yahay uusana haysan xog ku filan
In dugsi cusub yahay aysana wali jirin xog kufilan
Dugsigu mahaysto ardayda dhigta fasalada laga qaado imtaxaanka MCAS (Fasalada 3-8 iyo 10)
Heerarka Gobolka waxaa sanad kasta wax Kabadasha DESE. Boston School Finder ayaa kusoo daabacda xogta Heerka Gobalka bogaga dgsigeena, ayadoo ay la socoto xogta kale ee isla xisaabtanka dugsiyada. Waxaad macluumaad dheeraad ah kahelaysaa adoo booqanayaa Barta Islaxisaabtanka ee DESE.
Waa maxay macnaha "Tier 1," "Tier 2, iwm"ee ku qoran Bogga Dugsiga ee bartaada?
Marka lagu daro heerarka Gobolka, Boston Public Schools (BPS) waxay adeegsadaan Qaabdhismeedkooda Tayada Dugsiga (SQF) si loo qiimeeyo waxqabadka iyo tayada dugsiyadooda degmada. Nidaamkaan waxaa soo saaray BPS iyo iskaashatada kale ee bulshada.
Iskuulada waxaa loo qoondeeyay dhibco ka bilaabma 0-100 iyadoo lagu saleynaayo cabbiraado shan aag lagu sameeyo:
Waxbarida iyo Waxbarashada
Qoyska, Bulshada, iyo Dhaqanka
Hoggaaminta iyo Wada shaqeynta
Helitaanka Ardayda iyo Fursadaha
Dhibcaha oo sareeya waxay tusaale u yihiin tayada sareysa. Iyadoo lagu saleynayo dhibcahaan, iskuul kasta waxaa loo qoondeeyey heerka tayeynta iskuulka oo ka bilaabma 1 ilaa 4. Iskuulada Tier 1 waxay leeyihiin dhibcaha ugu sareeya waxaana BPS u cayimtay inay yihiin iskuulada ugu tayada sareeya. Iskuulada Tier 4 waxay leeyihiin dhibcaha ugu hooseeya waxaana BPS u cayimtay inay yihiin iskuulada ugu tayada hooseeya.
Heerarka (Tiers) iskuulada waxaa lagu sameeyaa qiimeyn waxaana wax laga bedelaa labo sano oo kasta waxaana bedela BPS. Waxaa jira iskuulada qaar (sida xarumaha waxbarashada hore lagu qaato iyo sidoo kale waxbarashada khaaska ah iyo iskuulada aan caadiga ahayn) kuwaasi oo aan la siin dhibco sababtoo ah mahaystaan arday sameysa imtaxaanka heerarka ama waa iskuulo bixiya waxbarashada gaarka ah.
BPS waxay ku sababaynaysaa labadaba fogaanta iyo heerarka tayadeeda dugsiga markay dhisayso Xeerkeeda Qorista Dugsiyada Xaafada Kuyaala (HBAP) markay siinayso qoysaska liiskooda dookhyada dugsiyada ay heli karaan.